यी ११ जलविद्युत, ४ माइक्रोफाइनान्स र २ बीमा कम्पनी आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार यी ११ जलविद्युत, ४ माइक्रोफाइनान्स र २ बीमा कम्पनी आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा
ती सबै कम्पनीले कुल ४ करोड ९४ लाख १६ हजार १४८ कित्ता आइपिओ जारी गर्नका लागि आवेदन दिएका हुन्। यी सबै कम्पनीले जारी गर्न चाहेको आइपिओको कुल मूल्य ५ अर्ब ६१ करोड ३६ लाख १४ हजार ८ सय रुपैयाँ छ। प्रक्रिया पुरा भएपछि बोर्डले निष्कासनको स्वीकृति दिनेछ। सामान्यतः स्वीकृति दिएको २ महिनाभित्र आइपिओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अपर हेवाखोलाले २० लाख कित्ता सेयर जारी गर्नका लागि बोर्डसँग स्वीकृति मागेको छ। बिक्री प्रवन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ।
मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनीले ३५ लाख ३१ हजार कित्ता आइपिओ जारी गर्नका लागि बिक्री प्रवन्धकमा सनराइज क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ।
Previous articleएक सय बर्षको उमेरमा नागरिकता
Next articleके अर्जुन घिमिरे पाँडेले सक्किगोनी छाडेका हुन? यस्तो छ कुरा?? सक्किगोनीमा नदेखिनुको कारण !
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल नेकपाद्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन